Ny Nosy Palau dia mikasa ny fandraràna ny masoandro tsy hamonjy vatohara
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny Nosy Palau dia mikasa ny fandraràna ny masoandro tsy hamonjy vatohara
Ny firenena bitika any amin'ny Nosy Pasifika, Palau, dia handrà ny masonkarena “misy haran-dranomasina” manomboka amin'ny taona 2020 izay lazainy fa fandraisana andraikitra voalohany manakana ny fandotoana simika mamono ireo haran-dranomasina malaza.
Palau, izay eo atsinanan'ny Pasifika atsinanana eo anelanelan'ny Aostralia sy Japon, dia heverina ho iray amin'ireo toerana fialofana tsara indrindra eran'izao tontolo izao, saingy manahy ny governemanta fa ho lafo ny lazany.
Ny mpitondra tenin'ny filoha Tommy Remengesau dia nilaza fa misy porofo ara-tsiansa fa ny akora simika hita amin'ny ankabeazan'ny masoandro dia misy poizina amin'ny vatohara na dia amin'ny fatra minitra aza.
Nilaza izy fa matetika ireo sambo misitrika Palau dia mitazona sambo efatra isan'ora feno mpizahatany, ka miteraka ahiahy amin'ny fananganana simika dia mety hahatratra ny tampon'ny vatoharan-dranomasina.
"Amin'ny andro iray izay mitovy amin'ny galonà takelaka masoandro mankany amin'ny ranomasina any amin'ireo toerana fitrandrahana sy toerana snorkeling malaza ao Palau," hoy izy tamin'ny AFP.
“Izahay dia mijery izay azonay atao mba hisorohana ny fandotoana amin'ny tontolo iainana.”
Nankato ny governemanta ny lalàna mandràra ny tara-masoandro “misy poizina amin'ny vatohara” tamin'ny 1 Jan 2020.
Izay manafatra na mivarotra takalon'aina voarara tamin'io daty io dia miatrika lamandy $ 1,000 (3,300 baht), raha ny mpizahatany izay mitondra azy any amin'ny firenena kosa no haka izany.
"Ny fahefana hisintonana ny takalon'aina dia tokony ho ampy hanakanana ny fampiasana tsy ara-barotra azy ireo, ary ireo fepetra ireo dia mandanjalanja eo amin'ny fanabeazana ny mpizahatany sy ny fampitahorana azy ireo," hoy i Remengesau tamin'ny parlemanta taorian'ny nandaniana ilay volavolan-dalàna tamin'ny herinandro lasa teo.
Ny fanjakana amerikanina Hawaii dia nanambara ny fandrarana ny hodi-dranomasina misy vatohara amin'ny volana Mey amin'ity taona ity, saingy tsy manan-kery izany raha tsy amin'ny 2021, herintaona taorian'ny Palau.
Mandray anjara amin'ny fizahan-tany amin'ny fomba "ivelan'ny boaty"
Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Moi any Mombasa handeha ho masoandro